Yakka saaybarii - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 4:01 16 Fuulbaana 20214:01 16 Fuulbaana 2021
Lammiin Naayjeriyaa beekamaa interneetaan gowwomsuun doolara miiliyoona 20 ol hate
Instigiraamiirratti hordoftoota isaa miiliyoona 2.5’n biratti maqaa masoo Haashpaappii jedhamuun beekamu, Ramoon Abbaas, hattoota beekamoo addunyaa jedhamuun FBI barbaadamaa ture.
...tti maxxanfame 9:11 13 Hagayya 20219:11 13 Hagayya 2021
Namtichi kiriiptookaransii doolaara miiliyoona 600 ol hate abbichaaf deebiise
Namtichi maallaqa kiriiptookaransii doolaara miliyoona 600 ol baasu karaa intarneetiin hate irra jirreessa maallaqichaa abbaaf deebiisuun barame.
...tti maxxanfame 4:27 26 Adooleessa 20214:27 26 Adooleessa 2021
Hundumti keenya osoo hin beekiin basaastota taaneerraa laata?
Himannaan basaasaa sooftiweeriin 'Pegasus' jedhamu gaazexeessitoota, roogeeyyii fi hoggantoota siyaasaa irratti gaggeessaa turuu hin hafu jedhame, amma hojiin basaasaa gurgurtaaf ooluu agarsiisa jedhame.
...tti maxxanfame 8:10 10 Adooleessa 20218:10 10 Adooleessa 2021
Haleellaa saayiberii qaqqabeef US, Raashiyaa irratti tarkaanfii fudhatti jedhan Baayidan
Pirezidaantiin Ameerikaa Jooy Baayiden gita isaanii Raashiyaa Vilaadmir Putinitti akka himanitti, US haleellaa saayiberii Raashiyaa irraa dhaqqabuuf '' tarkaanfii barbaachisaa hundayyuu ni fudhatti,'' jechuu Waayit Haawus gabaase.
...tti maxxanfame 4:23 6 Adooleessa 20214:23 6 Adooleessa 2021
Gareen haleellaa saaybarii dollaarii miiliyoona 70 akka kanfalamuuf gaafatan
Gareen haleellaa odeeffannoo kompitaraa 'Colossal' jedhamuun beekamu duuba jiruu tokko, qaamoolee miidhaan haleellaa kun irra gaheef deebiisee faayilasaanii akka gadhiisu gachuuf, bitkooyiiniidhaan doolaarri miiliyoona 70 akka kanfalamuuf gaafate.
...tti maxxanfame 8:36 3 Waxabajjii 20218:36 3 Waxabajjii 2021
Haleellaa dhaabbata dhiyeessaa foonii duuba 'haakaroota Raashiyaatu jira'
Akka FBI jedhetti, garee REvil jedhaman kana haleellaa kaampaanii JBS irratti raawwateef seeratti dhiyeessuuf hojjechaa jira.
...tti maxxanfame 15:44 2 Waxabajjii 202115:44 2 Waxabajjii 2021
Kompitaroota Itoophiyaa '37,000 irratti haleellaa raawwachuuf yaaliin taasifamaa jira'
Kompitaroota 37,000 Itoophiyaa argaman irratti haleellaan saayibarii raawwachuuf yaaliin taasifamaa jira jechuun Eejansiin Nageenya Networkii Odeeffannoo Itoophiyaa (INSA) ibse.
...tti maxxanfame 6:39 9 Guraandhala 20216:39 9 Guraandhala 2021
Haakaroonni bishaan Filooridaa faaluuf yaalii taasisuun himame
Haakaroonni sirna kompitaraa, sirna bishaan magaalaa Filooridaa keessatti argamtu cabsee seenuun, hanga keemikaalaa ''balaafamaa'' tahe gadhiisuuf yaaluu aangawoonni himan.
...tti maxxanfame 9:37 14 Sadaasa 20209:37 14 Sadaasa 2020
Dargaggoon aappii farra arrabsoo fi doorsisa intarneetiirraa hojjete badhaafame
Dargaggoon ganna 17 lammii Baangilaadesh ijoollee waa’ee doorsisa onlaayiniin taasifamu barsiisuu yaaluusaaf Badhaasa Nagaa Ijoollee Addunyaa mo’ateera
...tti maxxanfame 5:34 25 Onkololeessa 20205:34 25 Onkololeessa 2020
Hakaroota maallaqa hatuun dhaabbilee gargaarsaaf arjooman
Ripportara waa'ee saayibarii
Gareen haakarootaa maallaqa hatan, dhaabbilee gargaarsaaf arjoomaa jiraachuun ogeeyyii damee kanaatti hiibboo taheera.